က Man Hybrid ကိုကုမ္ပဏီကမ်းလွန်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ၏ကျွန်း
က Man Hybrid ကို Company ၏ကျွန်း
က Man Hybrid ကိုကုမ္ပဏီ၏ကျွန်းတစ်ရှယ်ယာမြို့တော်ရှိပြီးတစ်ဦးအာမခံချက်အားဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်။ ဒါဟာအာမခံနှင့်ဝေမျှမယ် Capital ကိုအတူကုမ္ပဏီကကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့်အတူတစ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) အကြားတစ်ဦးပေါင်းစပ်ပါပဲ။ အခြေခံအားဖြင့်အဖွဲ့ဝင်ရှယ်ယာရှင်များဖြစ်လာမှမြို့တော်ကိုအထောက်အကူပြုခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောဖြစ်လာတစ်ခုသို့မဟုတ်စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ထဲသို့ဝင်လျှင်မြို့တော်အထောက်အကူပြုရန်သဘောတူသည်။
Hybrid ကိုကုမ္ပဏီများအုပ်ချုပ်ကျောင်းအုပ်ကြီးဥပဒေ (1931 အတွက်ပြင်ဆင်) 2004 ၏ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်က Man ၏ကျွန်းကိုဗြိတိသျှအဖြစ်များသည့်ဥပဒေအောက်ပါအတိုင်း။
က Man ၏ကျွန်းဖြစ်ပြီးကျွန်းကိုဗြိတိသျှကျွန်းတွင်တည်ရှိသည်။ ဗြိတိသျှသရဖူတစ်ခုနယ်မြေဖြစ်ခြင်းနေစဉ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမှီခိုသည်။ အတိတ် 1,000 နှစ်ပေါင်း, သူတို့ရဲ့ပါလီမန်က (ထို Tynwald ခေါ်) ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေများကိုဖန်တီးနှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပြည်တွင်းရေးအုပ်ချုပ်ရေးကိုင်တွယ်။ ဗြိတိသျှအစိုးရစစ်တပ်ကာကွယ်ရေးနှင့်နိုင်ငံခြားကိုယ်စားပြုမှုနဲ့တူပြင်ပကိစ္စများကိုင်တွယ်,
က Man Hybrid ကိုကုမ္ပဏီအကျိုးကျေးဇူးများ၏ကျွန်း
က Man Hybrid ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုကျွန်းအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်:
•လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရား: တစ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) အဖြစ်တူကာကွယ်ပါ။
•အဘယ်သူမျှမအခွန်ကောက်ခံမှု: အဘယ်သူမျှမကော်ပိုရိတ်အခွန်နှင့်မျှမတို့ခွဲဝေအခွန်; ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ကောက်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းလူတိုင်းအားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေဟာသူတို့ရဲ့အခွန်အာဏာပိုင်များကိုအကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်သည်။
•သီးသန့်လုံခြုံရေး: Ultimate အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်များ '' အမည်များကိုထုတ်ဖော်ဘယ်တော့မှနေကြသည်။
•အနိမျ့အနည်းဆုံးဝေမျှမယ် Capital ကို Authorized: အဆိုပါနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်အလွန်နိမ့်သည်။
•တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: သာလျှင်တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး Hybrid ကိုကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
•အင်္ဂလိပ်: အဆိုပါတာဝန်ရှိသူတဦးကသင်သည်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီတူညီသို့မဟုတ်က Man ကုမ္ပဏီအမည်ကို၏ရှိပြီးသားကျွန်းအလားတူမဖြစ်ရပါ။ ကုမ္ပဏီနာမည်ရဲ့မတိုင်မီကခွင့်ပြုချက်ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီအဖြစ်လျှောက်လွှာဖို့အစိုးရအနေဖြင့်လက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခဲ့ရသည်နာမည်တစ်ခု၏အသုံးပြုမှုထိုကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်အထိလှုပ်ရှားမှုများအထောက်အထားနှင့်အတူထောက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တရား၏အသုံးပြုမှုကိုသာကုမ္ပဏီ၏အခြားကုမ္ပဏီအပေါ်အစုရှယ်ယာအနည်းဆုံး 51% ရရှိထားသူအထောက်အထားနှင့်အတူခွင့်ပြုပါလိမ့်မည် "ကိုင်ပြီး" ။ နှုတ်ကပတ်တရားတော် "အုပ်စု" ၏အသုံးပြုမှုကိုသာကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီအုပ်စုတစုကိုပိုင်ဆိုင်အထောက်အထားအပျေါမှာခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦး "Trust မှ" ဖြစ်ပါတယ်ခဲ့ရသည်စကားလုံးတစ်လုံး၏အသုံးပြုမှုကိုသာ 2008 ၏ဘဏ္ဍာရေးန်ဆောင်မှုများအက်ဥပဒေ (FSA) အရတစ်ဦးလိုင်စင်ရယုံကြည်မှုကိုန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်ခြင်း၏အထောက်အထားနှင့်အတူသုံးနိုင်တယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအမည်ကိုလက်တင်အက်ခရာစဉျအက္ခရာများကို အသုံးပြု. မဆိုဘာသာစကားမှာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင်မည်က၎င်း၏လိုလားဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်အောင်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားအမည်များ English သို့ဘာသာပြန်ထားသောရမည်ဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီနာမတျော၏ဆုံးစကားလုံးကတော့ "လီမိတက်" သို့မဟုတ်အတိုကောက် ", Ltd" ကို အသုံးပြု. ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုယူဆပါတယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ရုံးနှင့်အတူယခင်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူပထမဦးဆုံးအတွင်းရေးမှူးနှစ်ယောက်ဒါရိုက်တာများအဆိုပြုတင်သွင်းထားတဲ့ပုံစံဌနှင့်အတူအသင်းမှတစ်စာချွန်လွှာများနှင့်ဆောင်းပါးများ Submit ။
ကော်ပိုရိတ်ဆန်ခါတင်ရှယ်ယာရှင်များနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ရာဇဝတ်မှုလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်မဟုတ်အဖြစ်စစ်မှန်တဲ့အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်များ၏ကိုယ်စားပြုမူလျှင်အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်များ '' အထောက်အထားတွေကိုလျှို့ဝှက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါ။
အာမခံခြင်းဖြင့် Limited ကုမ္ပဏီများ
တစ်ဦးချင်းစီသည်ထိုဆိုလူတစ်ဦးအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အခွင့်အရေးများရှိသည်အဖြစ်ကုမ္ပဏီများသည်ဤအမျိုးအစားယေဘုယျအားဖြင့်အဖွဲ့ဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုဘုံဖြစ်သကဲ့သို့ကလပ်အသင်းခြင်း, ချစ်ခြင်း, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အသင်းအဖွဲ့များနှင့် non-profit အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်ထူထောင်ပေမယ့်အဖွဲ့ဝင်တယောက်မျှမကျန်နေကြသည်။
ဝေမျှမယ် Capital ကိုအတူကုမ္ပဏီနှင့်အတူအာမခံကကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ပေါင်းစပ်က Man ဥပဒေများ၏ကျွန်း, ဤကုမ္ပဏီများသည်မတစ်ဦးချင်းစီရှိသည်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပူဇော်ရှိရာ Hybrid ကိုကုမ္ပဏီဖြစ်ပေါ်လာသော။
1 ။ ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားကုမ္ပဏီ၏ကိုထိန်းချုပ်တဲ့သူမှတ်ပုံတင်ပြီးအစုရှယ်ယာရှင် (မန်ဘာ) ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်သူတို့ကအမြတ်အစွန်းဖြန့်ဖြူးနေအကြိုးခံစားရဖို့အခွင့်အရေးများရှိသည်မဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကသာမဲပေးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲရန်ဒါရိုက်တာများရွေးကောက်တင်မြှောက်အဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အဆိုပါဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေး entity ဆန်ခါတင်ပထမဦးဆုံးလူတန်းစားအဖွဲ့ဝင်ပေးနိုင်ပါသည်။
2 ။ ဒုတိယလူတန်းစားအဘယ်သူ၏ဝိသေသလက္ခဏာအများပြည်သူမှတ်တမ်းများအတွက်အမည်မသိဖြစ်နေဆဲအတွက်အကျိုးရှိသောအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအမြတ်ခွဲဝေမှုခွင့်ရှိသည်တစ်ခုတည်းသောအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်။ သာဒါရိုက်တာများကုမ္ပဏီ၏ဖြန့်ဝေအောင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
တစ်ဦး Hybrid ကို Company ၏ကောင်းကျိုးများ
တစ်ဦးမဲ့ကိုးစားလော့ကျော်တစ်ဦး Hybrid ကိုကုမ္ပဏီအတွက်အဓိကအားသာချက်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိစိုးမိုးရေးသည်၎င်း၏သက်တမ်းကန့်သတ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ထို့အပြင် Hybrid ကိုကုန်သွယ်လုပ်ငန်းများနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး Hybrid ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ကျော်ရှိပါတယ်အဓိကအားသာချက်စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားထိန်းချုပ်မှုကနေသီးခြားနေရာတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်တင်းကျပ်သော CFC စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်အတူနိုင်ငံများတွင်နိုင်ငံသားဖို့ဆွဲဆောင်နေပါတယ်။
တစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းကအုပ်စိုး Hybrid ကိုကုမ္ပဏီများအတွက်အကြီးမားဆုံးအားသာချက်နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်အဖြစ်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်များမှာဖောင်ဒေးရှင်းကအနည်းဆုံး $2အမေရိကန်ဒေါ်လာလိုအပ်ပါတယ်စဉ်သာ 10,000 GBP ဖြစ်ပါတယ်။
အသင်းတစ်ခု Hybrid ကိုရဲ့ဆောင်းပါးများဒါရိုက်တာကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုစွန်နှင့် ပတ်သက်. အခွင့်အာဏာရှိသူ (ကယုံကြည်ကိုးစားပါနဲ့တူက) ကာကွယ်ပေးသူဘို့ပေးနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦး Hybrid ကိုကုမ္ပဏီအဖြစ်ကောင်းစွာအခြားတရားစီရင်မှုဘို့ကမ်းလှမ်းနောက်ထပ်အခွန်ငွေစုရှိပါတယ်။
တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင် (အဖွဲ့ဝင်) ၏နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားသားရှယ်ယာ 100% ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
နှစ်ခုမန်နေဂျာ (ဒါရိုက်တာများ) ၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးဆိုတိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်သူများဖြစ်နိုင်သူလိုအပ်သည်။ သာကိုသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များမန်နေဂျာအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
တိုင်းကုမ္ပဏီက Man ၏ကျွန်းတစ်မှတ်ပုံတင်ရုံးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။
နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်2GBP သို့မဟုတ်အခြားငွေကြေး၎င်း၏ညီမျှသည်။ မြို့တော်ထုတ်ပေးနိမ့်ဆုံးတန်းတူတန်ဖိုးကိုတဦးရှယ်ယာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက Hybrid ကိုကုမ္ပဏီအဘယ်သူမျှမကော်ပိုရိတ်အခွန်နှင့်၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များမှမြတ်များငွေပေးချေမှုကိုမနှိမ်အခွန်ပေးဆောင်။ မှတ်ချက်: အမေရိကန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ကောက်အခွန်ထမ်းလူတိုင်းအားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေဟာသူတို့ရဲ့အခွန်အာဏာပိုင်များကိုအကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်သည်။
အစိုးရနှင့်စာရင်းစစ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များ file ရန်မလိုအပျခရှိပါသည်။ စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများသာခြောက်လများအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ထဲကထားရှိမည်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာစာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဒါမှမဟုတ်စစ်ဆေးရေးအဘို့ထိုသူတို့ရရှိနိုင်စေရန်ပျက်ကွက်ဖြစ်နိုင်သောဒဏ်ငွေနှင့်ထောင်ဒဏ်နှင့်အတူတစ်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦး Hybrid ကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်တဦးတည်းမှသုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလက်ထက် မှစ. ယူနိုငျသညျ။
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း Hybrid ကိုကုမ္ပဏီများဝယ်ယူမရရှိနိုင်ကြသည်။
စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုမရှိအခွန်ငွေ, ရှယ်ယာရှင်များ '' privacy ကို, ထိုရှယ်ယာရှင်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကာကွယ်, ကုမ္ပဏီအစဉ်အမြဲအသက်, အနိမ့်ရှယ်ယာမြို့တော်နှင့်အင်္ဂလိပ်တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါသည်: က Man Hybrid ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုကျွန်းအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်။